"IHE MMEBI ABUO" EWEPU LA ANTO NA ULO BBNAIJA
Home casino apps echt geld deutsch chip https://isimbido.tv/gambling-apps-apple/
BBNaija “ihe mmebi abuo” ewepu la Anto na ulo BBnaija ihe nkiri ahụ, na-aghọ nke iri na otu nakwa dị ka onye ọhụụ nke onye ọ bụla ga-ewepụ.
N’izu gara aga, “Big Brother” (Biggie) na-achọ ka ha kpọọ egwuregwu dịka otu.
N’oge gara aga, ndị na-arụkọ ọrụ ọnụ bụ Bitto na Princess (Pritto), Deeone na Vandora (Vandee), Angel na Ahneeka (Gelah), Ifu Ennada na Leo (Lifu) kpụpụrụ na ngosi ahụ na Khloe na K-Brule (Ksquared) bụ ndị a na-ekweghị.
N’izu gara aga, Onyeisi nke Ụlọ (HoH) nwere ihe ùgwù ya na-ahapụ ya n’enweghị ohere iji gbanwee nhọpụta.
Enwere ike ịnweta nnukwu ụgwọ nrite nke nde N25 (25 million) na ndị enyi ụlọ ibe ya natara ọkwa kachasị elu site n’aka ndị ibe ụlọ ibe ha.
Onye amụrụ ụlọ Amerịka, onye gbapụrụ n’ụlọ ezumike ya n’izu gara aga, ya na onye òtù ya, Miracle.
Otú ọ dị n’izu a, BBNaija na-akwado Ebuka Uchendu mara ọkwa na Anto natara ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ndị ọkpọ site na Fans gafee ụwa ma e jiri ya tụnyere ndị ibe ibe ha bụ ndị a kwadoro maka ịchụpụ n’izu a.
Onye na-ezigara onye ọhụụ ahụ kpugheere onye ọbịa bụ Ebuka Uchendu na isi nzube ya n’ụlọ ahụ bụ iji nweta nnukwu ihe nrite.
Otú ọ dị, ọ na-amasịkarị onye ibe ya, bụ Tobi.
O kwuru, sị: “Enwere m anya na Tobi ọ bụ ezie na ọ bịarula nso Cee c. Ọ bụ nwata, anyị nwere ike ịbụ ndị enyi. ”
Mgbe ya na Ebuka na-akparịta ụka, Anto kwenyesiri ike na Cee c nwere àgwà banyere Tobi. “Enwere m ike ịhụ Cee c anaghị amasị ya mgbe mụ na Tobi na-akpakọrịta”.
Onye ezinaụlọ a na-apụ apụ wepụtara ohere iji kpochapụ ọdịnihu ya na onye ụlọ ibe ya Lolu.
O kwetara na ya na ya na-etinye oge dị ukwuu n’ihi na ọ hụrụ ya n’anya n’eziokwu, ọ bụ ezie na ọ na-ekwu na ọ ga-emeghe n’ọdịnihu.
“Mmasị ya, ọ bụ enyi m, anaghị m ekwe nkwa ọ bụla”.
N’ụzọ dị mkpa n’oge mkpofu ahụ, Ebuka na-atụgharị anya.
LELEE IHE FANI KAYODE KWURU GBASARA BUHARI
Onye na-elekọta ya, nke yiri uwe ejiji nke Nigeria mara dị ka “Baba Riga”, kwupụtara na ndị na-ekiri ha nwere ohere ịme votu iji kpọghachite onye ezinaụlọ abụọ na-abanye n’ụlọ iji nọgide na-ebi ndụ maka nnukwu onyinye ahụ ruru N45 nde.
Maka ugbu a, ndị ụlọ akwụkwọ itoolu n’ime ụlọ ahụ ga-anọgide na-asọ mpi maka nnukwu ụgwọ.
CARDINAL KEITH O'BRIEN ANWUOLA MGBE O DI AFO 80